अन्तर्वार्ता | 2019-05-13 11:45:00 |
नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादीबीच एकता भइरहँदा तपाईं लगायत नयाँ शक्तिका केही नेताहरुले बेग्लै भेला गर्नुभयो । नेकपामा प्रवेश गर्ने हल्ला पनि चल्यो । वास्ताविकता के थियो ?
नेकपामा प्रवेश गर्ने कुरा होइन । सामान्य चियापान गरेको हो । वास्तविकता यहि हो कि हामी नेकपामा प्रवेश गर्नका लागि भेला गरेको होइन । यो प्रकरणमा दुई कुरा छन् । जसरी र जुन रुपमा एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो, त्यो स्वभाविक भएन । केन्द्रीय समितिमा छलफल नै नगरी माथिमाथि एकता भयो । जसमा धेरैको सहमति छैन । अरु बोल्न सकेका छैनन् । म बोलिरहेको छु । अर्को कुरा के हो भने, बाबुराम भट्टराईलाई उपेन्द्र यादवले सपथ खुवाएको सुहाउँदीलो भएन । बाबुराम भट्टराई संघीय परिषदको अध्यक्ष भनेर मानिसकेपछि त्यो भन्दा तल्लो वरियताका उपेन्द्रले कसरी सपथ खुवाए ? यो मिलेन ।
पार्टी एकता हुँदैछ भन्ने कुरा के तपाईंले सञ्चारमाध्यमहरुबाट थाहा पाउनुभयो ?
हैन मलाई त जानकारी दिएका थिए । वार्ता समितिको सदस्य म पनि हो । तर म अक्सर वार्ता समितिको वैठकमा अनुपस्थित हुन्थे किनकी म मधेसमा हुन्थे । तर जब म काठमडौं आएको बेला वार्तासमितिको अन्तिम बैठक बस्न लागेको थियो, त्यो बेला नवराजजीसँगै थिएँ म । कम्तिमा अरुबेला जस्तो भए पनि अन्तिम बैठकमा त म आएको मौकामा मलाई नवराजजीले बोलाउनु पर्ने थियो । अहँ, बोलाएनन् । मलाई केही भनेनन् । उनी वार्ता गर्न जाँदै थिए, मैसँग छुटेर गए तर मलाई जाऊँ भनेनन् ।
बाबुराम भट्टराई आफ्नो बाहेक कसैको मतलव नराख्ने मान्छे हो भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा थिएन र ?
मलाई मात्रै होइन, तपाईंलाई पनि थाहा छ । यो देशका सबै कम्युनिष्टहरुलाई पनि थाहा छ । कम्युनिष्ट पार्टी छाड्दा पनि एक्लै छाडनु भयो ।
अनि यस्तो प्रकृतिको मान्छेले समाजवाद ल्याउन सक्ला ?
हैन, समाजवाद त म अहिले के भन्नु र ? बाबुराम जस्तो हुनुहुन्छ म पनि त्यस्तै छु । यसकारण म उहाँसँग बढी मिल्छु । म पनि आफ्नै सुरले एक्लै हिँड्ने मान्छे हो । मलाई कसले कहाँ के गर्यो मतलव हुँदैन । मलाई कतिपय अवस्थामा घर परिवारकै मतलव हुँदैन । मलाई कसैले केही नराम्रो गर्यो भने पनि ऊ प्रति नराम्रो सोच आउँदैन । मलाई मेरो जग्गाजमिन खाएका मानिससँग पनि विद्वेष छैन । म त समाज राम्रो बनाउन खोजिरहेको छु ।
तर बाबुराम भट्टराई त आफ्नो स्पेस बनाउन जस्तोतस्तो पनि निर्णय गरिहाल्नु हुन्छ भन्ने छ नि त ?
– त्यस्तो होइन । बाबुराम भट्टराईले चाहँदा कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री हुन सक्ने मान्छे हो । तर उहाँमा कुनै स्वार्थ छैन ।
वैकल्पिक शक्तिका रुपमा नयाँ शक्ति आएको थियो । पुरानै ढर्राको संघीय समाजवादीसँग मिसिएपछि अब यो कसरी नयाँ शक्ति ? कसरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ?
नयाँ शक्तिको ठाउँमा हामीले त्यो बेला समाजवादी पार्टी भनेर नाम राख्न खोजेका थियौं । तर नयाँ शक्ति नै राख्यौं । जुन बेला बाबुराम भट्टराई आउनुभयो नयाँ शक्ति लिएर त्यो बेला धेरै मानिस स्वतस्फूर्त रुपमा नयाँ शक्तिमा आए । तर भनेर मात्रै भएन । सपना पूरा गर्न संगठन र सत्ता चाहिन्छ । सत्ताको लागि चुनावमा जानु पर्ने । त्यही बेला प्रचण्डको सरकारले चुनाव चिन्ह नदिएर बाबुरामलाई प्रचण्डले गोर्खे लौरी लगाइदिए । आँखा चिन्ह मात्रै हामीले पाएको भए आज हाम्रो यो दूर्दशा हुने थिएन ।
प्रचण्डलाई दोष दिँदै हुुनुहुन्छ । तर प्रचण्डले होइन, बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएको ?
–बाबुराममा खुबी थियो । बाबुरामले आफ्नो बलमा पाएको पद हो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद आफूले छाडेर कसैलाई दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
कुनै बेलाका लोकप्रिय नेता बाबुराम भट्टराई आज किन यति आलोचित हुनुहुन्छ ?
– बाबुराम जस्तो विद्वान कुनै पनि पार्टीमा छैनन् । विश्वमञ्चमा गएर कुनै पनि नेताले बोल्न सक्दैनन् । सोसियल इकोनोमिक्सका विश्वमा गएर बोल्न सक्ने एकजना मात्रै बाबुराम हुन् । अहिले उहाँको लोकप्रियतामा केही कमी भएको होला म मान्छु तर उहाँ जति कुशल नेता नेपालमा कोही पनि छैनन् ।
आफैले जारी गरेको संविधानको अनरसिप नलिने मान्छे कसरी कुशल क्षमतावान र विद्वान ?
छ महिनादेखि मधेस बन्द छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँले मधेसप्रति चिन्ता गर्नुभएको हो । उहाँ मात्रै एकमात्र नेता हो जो त्यो बेला मधेसमा जानु भयो । कम्तिमा बाबुरामसँग त्यो हैसियत त थियो । त्यसकारण बाबुरामलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । आफैले जारी गरेको संविधानलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । तर कमजोरी छ पनि भन्नुभयो । काठमाडौंका मिडिया त यस्ता छन् कि मलगायत नेताहरु नेकपामा प्रवेश गर्न लागेको हल्ला चलाई दिए ।
एकातिर पार्टी एकता हुँदैछ, अर्कोतिर नयाँ शक्तिका चिनिएका नेताहरु कोठे बैठकमा व्यस्त छन । अनि के बुझ्ने त ?
मलगायत किन गएनौ भन्ने बुझ्नु पर्छ । जुन क्याम्पसमा उपेन्द्र यादव पढ्थे, त्यहाँ म पढाउँथे । उपेन्द्र यादवलाई हात समातेर विभिन्न जिल्लामा लगेर मधेसको बारेमा लेख्ने व्यक्ति उपेन्द्र भन्ने यिनै हुन् भनेर चिनाउने मान्छे मै हुँ । उपेन्द्र यादवको पार्टीका ७५ प्रतिशत मानिसले मलाई चिन्छन् । मेरो यस्तो विगत छ । तर मलाई यो एकता प्रक्रियाबाट टाढा राख्न खोजियो । जसका कारण म एकता प्रक्रियामा गइनँ । मलाई हिनताबोध भयो । अपमान गरियो ममाथि । मैले बाबुरामको फोन उठाउन पनि छाडिदिएँ ।
यसको मतलव अब तपाईको आदर्श बाबुराम रहनु भएन ?
किन नहुने ? उहाँ मेरो आदर्श नै हो ।
फोन नै उठाउनु हुन्न भने कसरी आदर्श ?
फोन नउठाउँदैमा आदर्श हुँदैन भन्ने हुँदैन । उहाँसँग मेरा केही रिजर्भेसन छन् । त्यसकारण फोन नउठाएको हो । अहिले पनि मेरा आदर्श उनै हुन् । तर फोन उठाएको छैन । म आफ्नो ढंगले हिँड्छु । विचार र सिद्धान्तको दृष्टिले हामी बीच समानता पनि छ ।
पार्टी एकतापछि सरकार छाड्ने चर्चा छ । के हुन्छ ?
पार्टीले सरकार छाड्छ । यहि सहमति भएको छ ।
सरकार चाहिँ किन छाड्नु पर्ने हो ?
किनभने प्रतिपक्षी दलको भूमिका नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेस अहिले भ्रष्टाचार गर्न नपाएर अतालिएको छ । हामी यो देशको सशक्त प्रतिपक्षी बन्न चाहन्छौं । त्यसैले हामीले उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्नु पर्छ भनिसकेको छु । उपेन्द्र यादवले संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । त्यो पूरा भएको छैन ।
भन्न त नेपालका नेताहरुले देश स्विट्जरल्याण्ड जस्तो हुनुपर्छ पनि भनेका थिए । खै भयो त ?
संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन नेकपाले दिएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएन । यसकारण अब पार्टीले सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा आउनु पर्छ ।
तपाईंका नेताहरुले यो देशको रुपान्तरण गर्न सक्छन् भने खै त एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि नुमना मन्त्रालय बनाउन सकेको ? जनता सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्था छ । कसरी पत्याउने तपाईंका नेतालाई ?
उपेन्द्रले त यो सरकारलाई सहयोग गरेका हुन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले तयार पारेको शिक्षा ऐन त केपी ओलीले अगाडि बढाउन दिएका छैनन् भने उपेन्द्रले चाहँदैमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन ।